Ulusu luyisikhokelo sethu phakathi kwehlabathi elingaphakathi nelingaphandle lomzimba. Ngokukhawuleza ukuba iingxaki zivela ekusebenzeni kwezitho zangaphakathi, ulusu luzama zonke iindlela zokusitshela ngale nto kunye nokulumkisa malunga nezifo ezinzulu. Nokuba iifowuni ezincinci zisenza sikhokele ingqalelo kwimpilo, kodwa asiyikuyiqonda le miqondiso kwaye kaninzi siyayihoxisa.
Ukufunda indlela yokuchonga izizathu zeengxaki zesikhumba ezilula, kwaye eli nqaku liyakunceda ukuqaphela ingxaki kwinqanaba lokuqala. Ngoko, makhe siqale.
I-Acne iyona nto isifo esiqhelekileyo sikhumba. Ezi "ziphoso ezinobungozi" ziqhelekileyo kumntu. Amantombazana azama ukuwaguqula ngokucoca kwinqabileyo ye-ambulera, abafana bazama ukuwaphatha ngokuphulukisa ama-creams, kodwa akukho namnye abazama ukuwaphilisa ngaphakathi.
Isinyathelo sokuqala esifanele senziwe kukuba kudibaniswane kunye nodermatologist. Uya kubonakalisa isizathu kwaye athumele uviwo olongezelelweyo oogqirha abadibana nommandla ochaziweyo womzimba. Ngokuqhelekileyo unyango luqhutyelwa yi-gastroenterologist.
Ukuba iintlanzi zihlala zomelele kwicala eliphambili lobuso, oku kubonisa ukungasebenzi kakubi kwisibindi, isisu kunye ne-pancreas. I-Acne eetempileni yimiqondiso yeengxaki ezihambelana nesilwanyana. Iintlanzi kwiidama zibonisa ukungaphumeleli emathunjini kunye nokulimala kwe-microflora yayo. I-acne emlonyeni-iingxaki kwi-gynecological part, ukuhluleka kwe-hormonal. Ukuba ukukhawuleza kubonakala ngokubomvu nokuvumba - oku kukuphawu lokungabikho komzimba.
Ngaphantsi kwamehlo aqhelekileyo kuba ngumphumo wokukhathala, ubusuku bokulala, ukuxhatshazwa okubonakalayo emva komsebenzi omude kwikhompyutheni, ukungcola umzimba, ukungabikho kwamavithamini A, C, E, kunye nesiphumo sokunyamekela okungafanelekanga kwamehlo enqameko kwamehlo kunye nokusetyenziswa kwezimonyo ezingenanto. Omnye kufuneka athathe ingqwalasela iimpawu zomntu ngamnye - kufuphi nommandla wesikhumba weempahla, ubuthathaka be-capillaries.
Kulula ukuqeda le patheni ngokutshintsha imihla ngemihla kunye nokutshintsha umgangatho wezonyiso kwi-qualitative, ngokukhethekileyo kwiinkophe ezantsi.
Kunzima kunzima ukurhoxisa izibonda phantsi kwamehlo, xa isizathu saso silele kwisifo sezitho zangaphakathi. Okokuqala kufuneka uqaphele umthunzi weesangqa: Umbala ohlaza okwesibhakabhaka ubonisa ukuphulwa komjikelezo wegazi, i-yellowness iyangqina kwisifo sesibindi, ubomvu luphawu lokusebenza kakubi kwesibindi kunye nokungabikho komzimba.
Isizathu se-edema kunye neepilisi ezikhukhulayo kukulibaziseka kwimizimba yomzimba ongaphezulu kwemithombo, ukuphazamiseka kokuhamba. Ukuxazulula ingxaki, kuyimfuneko ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi ngosuku.
Ukuchithwa kwamanzi - amabala omdaka obuninzi bobunjwa kunye nobukhulu. Ukubonakala kwabo kubangelwa yimveliso engaphezulu kwe-melanin emzimbeni womntu. Isizathu sokuvela sisifo singangena kwisifo sangaphakathi sezitho (i-chloasma) okanye ukusabela kwemisebe ye-ultraviolet kunye nemiphumo yokuphathwa kakubi kwesikhumba (i-melasma). Ngokuqhelekileyo abantu abayithobeli ingqalelo kwiindawo ze-pigment, ingakumbi ukuba zifumaneka kwiindawo ezinokuthi ziboshwe ngeengubo. Kodwa kuthekani ukuba i-pigment isasazeka ebusweni, iingalo kunye nemilenze? Kule meko, kufuneka uphulaphule umzimba kwaye ufumane indlela yokujongana nesifo.
Ukukhupha i-giperpigmentatsiyu inokubangela isibindi kunye nesibindi sesilonda, ixesha elide, ukuphazamiseka emsebenzini weengqungquthela ze-endocrine, iingxaki ze-metabolism. Ukuba isibangela singaphakathi kwimizimba yangaphakathi, ngoko kuyimfuneko ukuqhagamshelana nogqirha ukuze ufumane ezinye iingcebiso kunye unyango.
Shintsha umbala wesikhumba wobuso . Ekuseni, sizijonga esibukweni, ngezinye iinkcukacha siqaphela ukuba ulusu lushintsha umbala walo kwaye njengesiqhelo aluyikunyamekela, kodwa kuya kuba lufanelekile. I-pallor yolusu ikhuluma ngokunyanzeliswa kwegazi, i-anemia, ukungaphumeleli kwezintso, isifo somphunga kunye nenkqubo yokutya. Umbala wesikhumba ophuzi ubonakala kubantu abaphethwe yisibindi kunye nesifo se-gallbladder. Ikhumba elibomvu lithetha nge-ohypertension kunye ne-tachycardia. Ithenda yesikhumba se-Orange uphawu lokungaphumeleli kweengqungquthela ze-adrenal. Kwiyiphi na le meko, isibheno kuyimfuneko.
Iintloko ziyinxalenye engabonakaliyo emzimbeni, kodwa kungekhona ubunzima obuncinci ekunakekeleni. Kodwa ngamanye amaxesha ukunakekelwa okuqhelekileyo akunakunceda ekuxazululeni ingxaki enjengokuqhekeka izithende. Ukuqhekeka kwizithende kungaba ngumqondiso kwenye yeengxaki: ukuphazanyiswa kwenkqubo ye-endocrine, isifo sikashukela, izifo zesisu, i-eczema, i-psoriasis, i-fungus. Kodwa ungesabi phambi kwexesha. Isikhumba sasebusika semilenze sisengozini ngenxa yokutshintsha kwexesha lokushisa, oku kungabangela ukuphambuka kwezithende.
Uncedo lokuqala lokutya kwesetyhefu
Ioli e-flaxseed, izakhiwo zayo ezincedo
Ukwenziwa kwe-Acupuncture: Ukulahleka kwesisindo esheshayo
Ukushona kwelanga: unyango lwasekhaya
Uncedo lokuqala lokulimala okuhlukahlukeneyo
Iibisiki kunye ne-sinamoni kunye ne-tshokoleta
I-Sandwich ene-salum e-salted kunye ne-avocado
I-Pasta ene inkukhu, iitato kunye nesipinashi
Indlela yokugcina ithemba ngexesha lokukhulelwa?
I-biography yomdlali uPatrick Swayze
Ukufunda nomntwana imilo kunye nemibala
Kutheni sifanele siceba uhambo loNyaka omtsha ngoku?
U-Anna Sedokova waqhekeka kunye nomthandi omncinane
Iintlobo kunye neengxaki zeendlela zokudanisa ezahlukeneyo
Indlela yokubuyisela umbala wombala omnyama